Nepali Rajneeti | यस्तो बोल्ड निर्णय गर्दै सरकार, आखिर किन यस्तो गर्दैछन?
यस्तो बोल्ड निर्णय गर्दै सरकार, आखिर किन यस्तो गर्दैछन?
फागुण २७, २०७७ बिहिबार ५२६ पटक हेरिएको
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदीय प्रक्रियाले राजनीतिक निकास नदिए पुनः ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
‘संसद पूनस्र्थापित भएपछि संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ ? समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, पाउनुभयो भने ठीकै छ,’ उनले भने, ‘हैन भने राजीनामा दिनुहुन्छ ।
राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ०७६ को उपधारा २ अनुसार नै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने कोसिस हुन्छ । सरकार बनेन भने चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।’
एमाले पार्टीमा माधव नेपालको स्थान के हुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता पोखरेलले भने, ‘माधव नेपाल जीमात्रै हैन, पार्टीमा सम्बद्ध हरेक नेता साथीहरुले विगततिर फर्केर हेर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ ।
फेरि एकताबद्ध भएर अघि जानुपर्छ । हिजो कै तर तरिका अपनाइँयो भने कसैका लागि हितकर छैन । फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ ।’